Torolalan’ny Global Voices Amin’ny SXSW · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2012 11:55 GMT
sehon'ny SXSW amin'ny alina. Tompon-tsary: Biyani Photography (2011)
Amin'ity herinandro ity (9 Martsa) dia hifangaroharo hifampizara ireo hevitra fanavaozana tanteraka sy hira-hisotrosotro ireo adalan'ny Texas, mpitendry zava-maneno, mpamokatra horonantsary, olona manan-talenta amin'ny fanamboarana sy ireo mpankafy manao fety any Austin. Ny fetiben'ny mozika sy tafatafa South by Southwest (SXSW), na ny Atsimo araka ireo Tatsmo, izay mahatratra ny faha-25 taonany ankehitriny, dia manomboka ny Zoma 9 Martsa 2012 ary mifarana ny 18 Martsa. Hetsika telo izay mifantoka amin'ny mozika, ny horonantsary ary ny teknolojia fifandraisana no tena horesahina anatin'io tafatafa io. Ny SXSW Music dia iray amin'ireo fetibe goavana indrindra mikasika ny mozika any Etazonia izay atrehan'olona eo amin'ny 20,000 eo ho eo.
Ny 9 Martsa ka hatramin'ny faha-13 dia hovelabelarina amin'ny olona ao anatin'io Tafatafa Fifandraisana io ireo hetsika mampiseho ny mediam-bahoaka, media tsy miankina ary ireo fifampidiran'ny teknolojia sy ny fiovana sosialy . Hisy naman'ny Global Voices sy mpanohana maro handray anjara anatin'ireo hetsika famelabelarana azo andraisana anjara ao amin'ny SXSW.
Ireo Tolotray mikasika ny Famelabelarana Azo Andraisana Anjara
* Mpanoratra ao amin'ny Global Voices sady mpikambana ao amin'ny fintantanana, i Jillian York avy ao amin'ny EFF.
Alahady 11 Martsa 12:30pm – 1:30pm
Ahoana ny fomba hampandehanana Vohikala Sosialy iray sy tsy Mamono Ireo Mpampiasa Aterineto
Ity famelabelarana ity dia mifantoka amin'ny media sosialy sy ny fandriampahalemana, asongadina manokana ireo firenena izay mametra ny fahalalahana miteny sy mety hiampanga anao ho faty raha manisy feo ireo tsikeranao ao anaty aterineto ianao.
* Naman'ny Global Voices , i Mary Joyce avy ao amin'ny Meta-Activism.
Alahady 111 Martsa 11am – 12pm
Herin'ny Aterineto: Aorian'ny Fibanjinana Tsara sy Ratsy ny Aterineto.
Mifantoka amin'ny fiatraikany samy hafa ateraky ny teknolojia dizitaly eo amin'ny fahefana io famelabelarana io. Mety ho sabatra manana lelany roa io ka sady mamely ny voaforitra sy ny mpamoritra.
* Israeliana mpanoratra ao amin'ny Global Voices , i Gilad Lotan avy ao amin'ny Socialflow.
Talata 13 Martsa 12:30pm – 1:30pm
Ilay Asamarika Izay Manana Ny Lanjany Ao Anatin'ny Vohikala Amin'ny Ora Marina
Hizara ny ahiahiny mikasika ny herin'ireo tambajotra sosialy bitika amin'ny fanapariahana vaovao izy.
Sarin'i Rob de la Cretaz nalain'ny tenany ho amin'ny SXSW tao amin'ny Flickr ny 8 Martsa 2012 (CC-BY-NC-SA)
Mamaky ny Baloninao: Ireo Tantaran'ny Fipatitahana Dizitaly
Zoma 9 Martsa 2012 2:00 pm – 3:00pm
Mandinika ny fomba iatrehan'ireo mponina ambanivolo sy hanoneran'izy ireo ny olan'ny fipatitahana dizitaly anatin'ireo vondrom-piaraha-moniny.
Fiovana Sosialy, Media Sosialy ary Famokarana Horonantsary Sosialy
Zoma 9 Martsa 2:00pm – 3:00pm
Hizaràna ireo paika, fitaovana & paikady ho an'ireo mafana fo, manam-pahaizana tsy mikarama, mpirotsaka an-tsitrapo & olona mahay mamorona mba hanandràtana ny fiovana sosialy avy amin'ny alalan'ny lahatsary miendrika fanadihadiana ao amin'ny aterineto.
Ny fanakorontanan'ireo Fitaovan'ny Taonjato faha-21 Ny Hery Eran-tany
Famnelabelarana momba ny vokatra ateraky ny teknolojia sy ny media sosialy eo amin'ny famindrana fahefana avy amin'ireo governemanta sy ireo sampan-drahar-aha ambony ho amin'ireo olon-tsotra sy ireo sampan-draharaha madinika.
Mitoraka Bitsika ny Fahalasanan'i Osama: Avy any amin'ireo olom-pirenena Mankany amin'ny Mpanao gazety
Sabotsy 10 Martsa 3:30pm – 4:30pm
Sohaib Athar, izay mitoraka bitsika mivantana ny filatsahan'i Osama bin Laden tanatin'ny tsy fahalalana, miresaka momba ny fiainany tamin'ny fitsidihany voalohany an'i Etazonia hatramin'ny nahalasan'i bin Laden.
Media Fibodoana: Olona Mpanao Fihetsiketsehana Mandritra ny 24 Ora
Alahady 11 Martsa 5:00pm – 6:00pm
Manome topi-maso anatin'ny rafitry ny ezaky ny media izay fibodoana ny tany Wall Street amin'ireo antony mahatonga ireo fitokonana ary ireo fitaovana /paikady nampiasain'izy ireo hialàna amin'ireo mpanivana ny media mahazatra.
Andiam-pitaovana Iray Tsy Mahazatra: Fitaovana Teknika Hanonganana Mpanao Didy jadona
Alatsinainy 12 Martsa 12:30 – 1:30pm
Famelabelarana iray manoritsoritra ny fomba nanomanan'ireo fitaovan'ny media sosialy ny facebook, Youtube sy Twitter an'ilay fikomiana Ejiptiana izay nanonganana ny Filoha Hosni Mubarak.
Legiona Izahay: Fivoarana Dizitaly (R)
Talata 13 Martsa 11:00am – 12:00pm
Miresaka momba ireo sedra atrehana amin'ny famokarana horonantsary ny Mpanoratra/Tale Brian Knappenberger, LEGIONA IZAHAY: Ny Tantaran'Ireo Piraty Mafana Fo .
Hetsika Malalaka sy tsy “Ofisialy”
Raha natao ho an'ireo mpitana ny “badge” nandoavam-bola ho an'ny fitafana ny Tafatafan'ny SXSW, nanangona lisitrana hetsika malalaka ho an'ireo tsy manana ‘badge” ireo mpitahiry ao amin'ny aterineto. Manana alimanàka mora ampiasaina ahitana hetsika malalaky ny SXSW ilay Torolalana tsy ofisialy ny SXSW. Nandray ny raharahan'ny SXSW ny Sanfranfreesco izay mipetraka any San Francisco, ilay foiben'ny hetsika mampiala voly sy maimaim-poana any amin'ny faritry ny “Baie” an'i Kalifornia. Afaka sivanina amina laharana fanontaniana fikarohana tahaka ny fisian'ireo zava-pisotro maimaim-poana, mozika sy zava-baovao azo avy amin'izany. Hita ihany koa izy ireo ao amin'ny Twitter @FreeSXSW. Miaro ny zava-tsoa ateraky ny SXSW maimaim-poana ihany koa ny mpampiasa Twitter @SXSWPartylist.
Manana hetsika maimaim-poana roa voafantina ihany koa io tafatafa ofisialin'ny SXSW io, anatin'izany ny lanonana maharitra herinandro any amin'ny morontsiraky ny Auditorium izay manasongadina ny The Shins, Counting Crows ary ny The Cult. Mandritra ireo telo andro manomboka ny 9-11 Martsa, manome ireo zava-baovao farany nivoaka amin'ireo jeux video ho an'ireo adalan'ny lalao ny ScreenBurn Arcade. Afaka mandray anjara anatina fitsidihana mampahatsiahy ny vanim-potoana 90 ny kolontsaina manokan'i Austin ireo mpankafy horonantsary amin'ny alalan'ny fanatrehan'izy ireo ny Slacker 2011 izay naverin'ireo Mpamokatra horonantsary 24 ao Austin novokarina 20 taona taorian'ilay horonantsarin'i Richard Linklater, Slacker notovozina tanatina toe-tsaina hafahafa tena izy tao an-tanàna.